Git iyo fayl madhan > Vielhuber David
Git iyo fayl madhan09
Maaddaama Git uusan ogayn wax fayl ah, kaliya faylasha, qaab-dhismeedka galka madhan kuma dhammaado keydka. Si kastaba ha noqotee, maaddaama qaab-dhismeedyo badan iyo mashaariic gabi ahaanba u baahan yihiin tan, waa inay halkaas ku dhammaadaan. Dhaqan caadi ah ayaa ah in la abuuro waxa loogu yeero faylasha meesha lagu haysto (oo badanaa loo yaqaan .gitkeep), oo si maldahan u qeexaya qaabka galka. Faylashaas si fudud ayaa loo abuuri karaa oo, haddii loo baahdo, la hubiyo in faylasha kale ee galka ku jira la iska indhatiro.
Marka hore waxaan abuureynaa bakhaar tijaabo ah waxaanna abuureynaa faylal hoose:
Waxaan hadda haysannaa qaab-dhismeedka galka soo socda:
Sidii la filayay, xaalad git -u nooma muujinayo wax isbeddel ah:
Hadda waxaan u adeegsan doonnaa raadinta si aan u abuurno faylasha meelaynta dhammaan goobaha loo baahan yahay:
Waxaan hadda helnay galka / qaab dhismeedka feylka soo socda:
Xaaladda git -u waxay hadda ina tusaysaa in dhammaan faylku (si muuqata) ay ugu dambaynayaan keydka:
Haddii aan hadda dooneyno inaan hubinno in qaab-dhismeedka galka had iyo jeer uu ku dhammaado keydka, laakiin uusan ahayn wax faylal ah (marka laga reebo faylasha meesha lagu haysto), waxaan abuureynaa gitignore:
Waxaan ka faa'iideysanaa Cayaaraha laba geesoodka ah:
Sadarka ugu horeeya wuxuu si isdaba joog ah iskaga indha tirayaa dhamaan feylasha iyo faylalka (heer kasta ha ahaadee) galka "foo", safka labaad wuxuu si isdaba joog ah uga reebay dhamaan faylkan qaanuunkaan (heerkuu doonaba ha noqdee) khadka sadexaadna wuxuu ka reebay dhamaan feylasha .gitkeep (heer kasta) .
Hadda aan abuurno faylal tijaabo ah:
Xaaladda git -u waxay hadda na tusaysaa natiijada la doonayo: